Umuntu angabiza imiqondo emibili enjalo njengempilo nobuhle. Futhi isitha sabo esiyinhloko singaphezu ngokweqile. Lolu lwazi lukwabiwa ngabantu abaningi. Kodwa noma kunjalo, inani elikhulu labantu lihambisana nokugcwala kwezinga elihlukahlukene. Izimiso eziyisisekelo zokulwa nezimo ezinjalo ziyaziwa wonke umuntu futhi wonke umuntu ngendlela eyodwa. Kodwa akuwona wonke umuntu ongafika ohlelweni futhi aqonde umgomo ohleliwe. Futhi konke okuphathelene nomzwelo wengqondo. Kuyinto le nuance ebheka indlela yokulahlekelwa isisindo nguSemyonov.
Namuhla, abantu abaningi bafuna ukuthola izifiso zabo ngaphandle kokutshala imali enkulu. Futhi ezweni lanamuhla, iziphakamiso ezifanayo zigcwele nje kuphela ekhoneni ngalinye. Lezi yizidlo ezingcono kakhulu, ezihlukahlukene, cishe "eziphulukisa". Njengomkhuba wokubonisa, iningi lalezi zinhlinzeko, akukho lutho kunendlela ethile yokukhwabanisa. Kulokhu, indlela enjalo ibhekwa njengokuthola imali ngokuhlangenwe nakho kwabanye abantu. Ngokuvamile, izithako ngokwazo ezisetshenziselwa imithi enjalo zilimaza kakhulu emzimbeni womuntu. Futhi mayelana nomphumela, ngeke, noma kuthanda, kodwa isikhathi esifushane kakhulu.
Ngezenzo, ukuze ulahlekelwe isisindo ngendlela enempilo umuntu angakwazi kuphela uma ama-fat cells, ephenduka amandla, ashiswa ngesikhathi. Futhi ungakwazi ukufeza lo mphumela kuphela uma udla amakholori angaphansi kokudla kwakho. Futhi uma usenqume ukunamathela endleleni efanayo yokuphila, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuhambisana nalokhu kudla akudingekile isikhathi eside kakhulu. Ngakho-ke, umuntu ukhula kancane ngendlela efanayo. Futhi konke okunye, kungokwesikhashana nje.
Uma uzimisele kakhulu ukulahlekelwa isisindo, kubalulekile ukuthi usebenzise le ndlela njalo, mayelana nokusetshenziswa kwamakholori ngamanani amancane kunokusebenzisa imali. Kubalulekile ukuhlela kusengaphambili indlela entsha yokuphila, lapho konke kuzokwenzeka ngale ndlela. Kufanele kuqaphele ukuthi lokhu kudinga ukubonakaliswa kwamandla okungajwayelekile. Ngemuva kwakho konke, kufanele uzikhawule esitheni, kuyilapho ungafaki izitsha zakho ozithandayo. Kubaluleke kakhulu isikhathi sokubeka eceleni ukuqeqeshwa okuqhubekayo okudinga imizamo yomzimba. Yilapho iningi labesifazane abafuna ngempela ukulahlekelwa isisindo. Ngemuva kwalokho, ukuhamba ngokweqile ukudla okuthandayo kuyindlela yokuvimbela.
Ngakho, izithiyo ziye zawela - indlela eqinisekisiwe yokulahlekelwa isisindo ikhona.
Yebo, indlela enokwethenjelwa yokulahlekelwa isisindo ikhona, kodwa ngaphambi kokuthi iqale, kubalulekile ukuqaphela amaphuzu abalulekile:
Ingabe unesifiso sangempela sokulahlekelwa isisindo;
Ungakwazi yini ukuqonda izisusa emva kwalezi zinguquko?
Ulungele ukwenza isenzo.
Ukuqaphela lezi zinhlinzeko, ungasebenzisa indlela ekhiqizayo yokulahlekelwa isisindo. Phela, inzuzo yalo ebaluleke kakhulu ukuthi amafutha ahlala kuwe ngeke abuyele.
S.P. I-Semenov ingudokotela ovelele owaba ngumsunguli wezinqubo ezinhle, ezisebenzise ngempumelelo namuhla iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu. Futhi, ngalesi sikhathi, kulinganisa umyalo wamashumi ezinkulungwane zabantu, kokubili eRussia nakwamanye amazwe.
Isimo sokusebenza kwengqondo sidlala indima ebaluleke kakhulu.
U-Semenov wafunda inkinga yokukhuluphala iminyaka eminingi, futhi ngenxa yalokho wabonisa ukuthi indoda yanoma yimuphi unyaka njalo ingokwesimo sengqondo esifanayo salezi ezintathu:
inqubo yokuthola isisindo;
inqubo yokulahlekelwa kwesisindo;
inqubo yamandla ebhalansi.
Ithonya lesimo sengqondo mayelana nenqubo ethile ibeka izindawo eziqondile zobuchopho. Noma yiziphi izinqubo ziqala ingxenye ethile yobuchopho ngesikhathi lapho abanye bevaliwe khona.
Ikhono lethu nesifiso sokudla inani lokudla okwenza inzuzo yesisindo kuvuselele indawo yobuchopho obuphendula ngenqubo yokuthola isisindo. Futhi ngokuvumelana nalokho, lesi senzakalo se-subalcoholic sihlobene nokuntuleka kokuqonda kahle komsoco ngokwayo. Uma ukudla kudliwa kaningi ngaphezu kwalokho okudingekile ekusekelweni kokuphila, umzimba ujwayele ukuwusebenzisa futhi uqale ukulondoloza ama-calorie amaningi ngokwefomu lamaseli amafutha.
Izenzo ezinjalo zizinzwa ubuchopho, kanti lezi ziqalo ziqala ukubhekwa njengesijwayelekile, futhi umzimba uqala ukuqoqa lawo makhukhi. Futhi uma ukhona, kodwa ngenkathi unesimo sengqondo esinjalo, umzimba ubona izenzo zakho njengengozi noma usongo. Futhi njengomthetho, umzimba uqala ukumelana nezifiso ezinjalo, futhi ngaleso sikhathi ungakwazi ukuzwa induduzo nokukhathazeka.
Cishe, kungenxa yalesi sizathu ukuthi ukuhlukana okubuhlungu kakhulu nobukhulu obuningi kuhlotshaniswa. Ngokushesha lapho ubuyela endleleni yakho yokuphila, umzimba uvuselela kabusha izindawo zawo ezigciniwe, ubeka konke endaweni yayo, futhi ngaphezu kwalokho, ufihla indawo yokugcina.
Uma isimo sokusetshenziswa kwamafutha sesiphelile, kukhona ukuphendula kombukiso womzimba, kuqala ngokuzikhandla ukuchitha yonke into, futhi kuphikisana ngokuqinile nokuthola imali entsha, ngoba lokho okuhlukile kuye kuyingozi. Kulesi simo, isifiso sakho sihambisana nendawo yokwenza ubuchopho bakho, ngakho-ke usizana. Futhi ukulahlekelwa isisindo kudlula kalula futhi ngaphandle komzamo omkhulu.
Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi, ukuze ulahlekelwe isisindo futhi uhlale isisindo esiningi, kubalulekile ukushintsha umzimba wakho ohlelweni lokulahlekelwa isisindo. Kubalulekile ukunciphisa umsebenzi wendawo yobuchopho, lapho kusetshenzwa khona ama-khalori, futhi iminyango ngqo eyabangela ukulahlekelwa isisindo iyona esebenzayo kakhulu.
Ngokuqinisekile, imihlangano, eyakhiwe ngu-Semenov, izosiza ukufaka ukulahlekelwa kwesisindo.
U-Semenov wazama ukusebenzisa indlela ngayinye ngayinye. Wasebenzisa izikhathi zokuvuselela isiko kanye nemfundo yomzimba yomuntu. Ukushintsha okusheshayo ohlelweni lokulahlekelwa isisindo kwenzeka kakade ngesikhathi sesimiso sokuqala, futhi kuhlala amahora amaningana. Ngemuva kwalokho, udinga kuphela ukuqedela imiyalelo, okwamanje awusakhathazeki futhi ungenakubekezela. Futhi konke ngoba umzimba uyeke ukulwa nokuthatha izinto ezinjengokuthi usongo.
Uqhubeka ulahlekelwa isisindo futhi ulahlekelwe isisindo kuze kube umzuzwana othile, osungulwe nguwe. Futhi ngokushesha nje lapho umzimba uqonda ukuthi konke kuhambisane, kuwukuzilungisa kabusha kube umbuso olinganiselayo. Kodwa manje, isidingo sokudla okungenamkhawulo kakade kakade akukhathazeki.
Amathiphu we-TOP-10: Indlela yokukhipha kahle ukupompa imbongolo
I-Medbol: isethi yokuzivocavoca ngebhola lezokwelapha
Izindlela eziphumelela kakhulu zokulahlekelwa isisindo
Amathiphu aphezulu ama-5 nezindlela zokuzivocavoca: indlela yokulahlekelwa isisindo papa
Kuyini ukudla okubukwayo macrobiotic?
Ngingakwazi yini ukulahlekelwa isisindo ku-Pilates?
Ukugijima kwebusika: impilo enhle noma ngokweqile?
Ukuveza i-shish kebab evela enkukhu
Indlela yokukhetha ijeketi kunoma yikuphi ukuma: imithetho engu-3 yonke
I-Horoscope ye-Virgin-Woman ngo-February 2017
Umkhuba wokukhuluma - imithetho yokuxhumana ngokuhlonipha
Ukuvuselelwa komzimba onomuthi wokulwa nokuguga
Wedding, njengesenzakalo esicacile kunazo zonke ekuphileni
Ukudla okunomsoco wokukhula kwemisipha
Indlela yokukhetha ihansi ngezimakethe
Ukuvakashela okokuqala ku-gynecologist ekukhulelwe
Ukuziphatha komuntu othandweni ngehhovisi
I-Horoscope ka-2010 i-tiger emdlalweni we-zodiac
Izingane, ukulungiselela isikole